कति छन् सातै प्रदेशमा आइसियु र भेन्टिलेटर? – Health Post Nepal
२०७६ चैत २५ गते १५:४७
कोरोना विश्व कहर : संक्रमित ७ लाख नाघे, करिब ३४ हजारको मृत्यु
अधिकांश बिरामीमा श्वासप्रश्वासजन्य समस्या निम्त्याउने यो रोगको उपचारका लागि अतिआवश्यक उपकरणतर्फ ‘इन्टेन्सिभ केयर युनिट’ (आइसियु) र भेन्टिलेटर सबैभन्दा महत्वपूर्ण साबित भइसकेको छ।
युरोप, अमेरिकाका विकसित देशले पनि भेन्टिलेटरको जोहो गर्न नसक्दा धेरैको ज्यान गइरहेको छ। सामान्य अवस्थामा पनि गम्भीर रोगका बिरामी आइसियु र भेन्टिलेटर अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता रहेको हाम्रो देशमा महामारी सामना गर्न तयारी अभाव देखिएको छ।
यतिसम्म कि तीन महिनादेखि महामारी तयारीमा जुटिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आफूमातहातका अस्पताल र संरचनामा भएका आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अवस्था के छ भन्ने अझै जानकारी छैन।
हेल्थपोस्टनेपाल टिमले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँगका इकाई र निजी अस्पतालका दर्जनौं प्रतिनिधसँगका कुराकानीका आधारमा तयार पारेको रिपोर्टअनुसार हामीसँग करिब १ हजार १ सय ९ बेड आइसियु र ती बेडमा ६ सय ३६ भेन्टिलेटर रहेको छ।
अहिले पनि नाम चलेका, बहुविशेष सेवा भएका र क्रिटिकल केयर स्पेसियालिस्टसमेत रहेका अधिकांश अस्पतालका भेन्टिलेटर खाली छैनन्।
मुलुकमा हालसम्म नौजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। जसमध्ये सुरुमा देखिएका एकसहित अधिकांश उपचारमै छन्।
आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरिएका अधिकांश अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन र क्रिटिकल कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन नभएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही दिनअघि देशभर २ सय ३५ आइसियु थप गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १ सय २० आइसियु थप गर्नेसहित १ हजार बेडको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ। तर, अहिलेसम्म एउटा पनि भेन्टिलेटर थपिएको छैन। पछिल्लोपटक निक साइमन्स सोसाइटीले सरकारले १० थान पोटेवल भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ । तीमध्ये कर्णालीमा दुईसहित सुदुरपश्चिम र बाग्लुड.मा पठाउँने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सर्वेक्षण क्रममा निजी अस्पतालमा धेरै आइसियु बेड मेडिसिटी अस्पतालमा ३३ बेड रहेको उनले बताए। उक्त सर्वेक्षणमा सबैभन्दा धेरै ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा १८ र ह्याम्स अस्पतालमा १२ बेड प्राइभेट रुमसहितका आइसियु बेड रहेको छ ।
सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिमले दिएको तथ्यांकअनुसार नौ भेन्टिलेटर र ७० आइसियु बेड छन्। प्रदेश १ मा ४ सय ३१ आसोलेसन बेड र ४४ आइसियुसहित भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयको भनाइ छ।
त्यसैगरी प्रदेश २ सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सरकारी अस्पतालमा सातवटा भेन्टिलेटर र चार आइसियु बेड छन्। मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांकमा निजी अस्पतालमा रहेका आइसियु तथा भेन्टिलेटरको तथ्यांक अपडेट हुन बाँकी छ। बीरगञ्जका फिजिसियान डा. निरज सिंहले वीरगञ्ज सहरमा सरकारी र नीजि अस्पतालमा गरी ४० भेन्टिलेटर भएको बताए ।
गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार १ सय ३३ आइसियु बेड र ५४ भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा छन्।
त्यस्तै प्रदेश ५ मा १ सय ५० आइसियुसहित ४३ भेन्टिलेटर रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। उता कर्णाली प्रदेशमा ४ सय ३८ आइसोलेसन बेड र १० आइसियुसहित भेन्टिलेटर रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ।
विश्वमा हाल कोरोना भाइरसबाट १३ लाख ५० हजारभन्दा बढी संक्रमित भइसेकका छन् भने झन्डै ७५ हजारको मृत्यु भइसकेको छ।
चिकित्सकहरूका अनुसार संक्रमण देखिएका सबै बिरामीलाई आइसियु वा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्दैन। संक्रमणका कारण गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई मात्र आइसियुमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ।
विश्वमा फैलिएको भाइरसको प्रकृति हेर्दा संक्रमण भएकामध्ये २० प्रतिशतलाई मात्र अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने डा. पनेरु बताउँछन्।
उनका अनुसार अस्पताल भर्ना भएका बिरामीमध्ये पनि पाँच प्रतिशतलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ। आइसियुमा भर्ना भएकामध्ये दुई प्रतिशतलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
‘महामारी फैलिएमा हामीसँग भएको उपकरणले पुग्दैन,’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘यसका लागि सरकारले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार ३ करोड जनतालाई लक्ष्य गरेर हेर्दा कम्तिमा पनि ३ हजारभन्दा बढी आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘अन्य बिरामीका लागि आइसियु र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण अस्पतालमा भएका उपकरणको गणनामात्र गरेर हुँदैन,’ डा. मरासिनीले भने, ‘सरकारले कोेरोनाका लागि लक्ष्य गरेर उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
यो समाचार र इन्फोग्राफमा कर्णाली र प्रदेश २ को तथ्यांकमा नीजि क्षेत्रमा उपलब्धसमेत थप गरेर परिमार्जन गरेका छौ । : सम्पादक
Tags: आइसियु, काेराेनाभाइरस, भेन्टिलेटर
One thought on “कति छन् सातै प्रदेशमा आइसियु र भेन्टिलेटर?”
Ghanshyam Rouniyar says:
Sorry.state 1 ko data wrong cha….nobel ma matre total icu more den 50 ……general icu 》30,emergency icu5or6n neuro icu pani cha which canbused as icu n also picu for children …..tesai gari ventilator ko no pani besi cha….plz confirm the data
LeaveaReply to Ghanshyam Rouniyar Cancel reply